शुक्रवार खग्रास सुर्यग्रहन लाग्ने, विश्वका कतिपय मुलुकमा दिउँसै अध्याँरो हुने – YesKathmandu.com
शुक्रवार खग्रास सुर्यग्रहन लाग्ने, विश्वका कतिपय मुलुकमा दिउँसै अध्याँरो हुने
बुधबार ०४, चैत २०७१
काठमाडौं । शुक्रवार खग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएको छ । खग्रास सुर्यग्रहन लागेपछि विश्वका कतिपय देशहमा दिउसै रात पर्ने अनुमान गरिएको छ । कतिपय भुगोल शास्त्रीले एउटा अचम्मको खगोलीय घटना हुने र पुरै बिश्वको धेरै ठाउँमा खग्रास देखिने बताएका छन् ।
शुक्रबार दिउँसो सुर्यग्रहण लाग्ने भएको छ । सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमाको विशेष स्थितीका कारण पूर्ण सूर्यग्रहण लाग्ने गर्दछ । युरोप, अटलान्टिक महासागर र अफ्रिकामा खग्रास सुर्यग्रहण देखा पर्नेछ । चार घण्टासम्म सुर्यग्रहन देखिने अनुमान खगोलबिद्हरुले गरेका छन् ।
दिउँसो १२ बजेर ५६ मिनेटमा सुरु हुनेछ भने ५ बजेर ५ मिनेटमा यो अन्त्य हुनेछ । तर खग्रास सुर्यग्रहण भने २ मिनेट ५० सेकेण्ड मात्र लाग्नेछ ।
काले किस्ने says:
“खगोल” सूर्य ग्रहण हैन बालक । ग्रहण खग्रास या खण्डग्रास हुन्छ । partial लाई खण्डग्रास र पुरै ढाकिने हुदा खग्रास । कि अलिक पढलेख गर्नु कि जान्नेलाई सोध्नु ।
“खगोल सुर्य ग्रहण”?????????????
यो भनेको के हो ???????????????????
आजबाट काठमाडौँमा विमस्टेक बैठक सुरु हुँदै,चौथो शिखर सम्मेलनको मिति टुंगो लगाउने अपेक्षा
८६ वर्षको उमेरमा सगरमाथा चढ्दै